Maalinta: Al-Inshiqaq & At-Tur ama Buurta iyo Masiixa - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda Al-Inshiqaq (Surah 84-The Sundering) waxay sharraxaysaa sida dhulka iyo cirka loo gariirin doono oo loo burburin doono maalinta Qiyaame.
Marka Samadu jeexjeexanto (qiyaamada).Oy Eebe Addeecdo waana xaq addeeciddiisunee.Marka dhulka la fidiyo (qiyaamada).Oo uu soo tuuro waxa ku hoos jira, kana madhnaado. Oos Eeba Addeeco waana xaq adeeciddaasina. (wuxuu la kulmi Ruuxwalba Camalkiisa).Dadow waxaad u dhibboon ood u camalfali xagga Eebe, waadna la kulmi. Ruuxiise Kitaabkiisa (fiican) Midigta laga siiyo (waa mu’minkee).Waxaa la xisaabin xisaab fudud.Wuxuuna ku noqon Ciddiisii (Jannada joogtay) isagoo faraxsan.Ruuxiise Kitaabkiisa laga siiyo gadaashiisa (waa Dadka xune).Wuxuu u yeedhan Halaag. Wuxuuna gali Naarta Saciira.
Al-Inshiqaq 84: 1-12
Suuradda Al-Inshiqaq waxay ka digaysaa in kuwa aan waxqabadkooda la siin ‘gacantiisa midig’ ay geli doonaan ‘dab ololaya’ maalintaas.
Ma ogtahay in diiwaankaaga waxqabad la siin doono gacantaada midig ama dhabarkaaga?
Surah at-Tur (Surah 52-Buurta) ayaa si faahfaahsan u sharraxaysa sida dhulka iyo dadka loo ruxruxo Maalinta Qiyaame
Ee iskaga tag Nabiyow intay kala kulmaan maalinta dhexdeeda lagu halaagi doono.Maalinta ayan dhagartoodu wax u taraynin wax u gargaarana uusan jirin.Kuwa xad gudbay waxaa u sugnaaday caddibaad ka sokaysa (Qiyaamada), laakiin badankoodu ma oga.
Suuradda at-Tur 52: 45-47
Miyaad ku kalsoon tahay inaadan ‘khalad samayn’ oo aadan waligaa runta ula dhaqmin ‘been’ (been) si aad u gudubto xukunka maalintaas?
Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu caawiyo kuwa aan hubin sida diiwaanka waxqabadkooda loo siin doono maalinta Qiyaame. Wuxuu u yimid inuu caawiyo kuwa aan lahayn caawimaad. Wuxuu yiri Injiil:
xitaa maalintaas soo socota. Awooddaas ma leeyahay? Tawreedka Nabi Muuse wuxuu awoodiisa ku arkay xitaa laga soo bilaabo Abuuritaanka dunida lix maalmood gudahood. Markaas Zabur iyo nebiyadii ku xigay waxay sii sheegeen faahfaahinta imaatinkiisa si aan u ogaanno in imaanshihiisu runtii ahaa qorshihii samada. Laakiin sidee buu qofku ku noqdaa ‘idihiisii’ oo muxuu ula jeeday ‘naftayda ayaan u bixiyaa idaha’? Waxaan halkaan ku eegynaa.
Waxbaristii Ciise Masiix ayaa had iyo jeer dadka kala qaybisa. Tani run bay ahayd waagiisii ​​sidoo kale. Waa kan sida ay dooddani u soo gabagabowday iyo sida dadkii maqlay ay u kala qaybsameen
21 Qaar kale waxay yidhaahdeen, Hadalladaasu ma aha kuwa nin jinni qaba. Jinni miyuu indhaha u furi karaa nin indha la’?
Yooxanaa 10: 19-42
Tags:injiilka Yooxanaamaalinta qiyaamesuurada 52suurada 84suurada at tur.suuratu al inshiqaaq